नयाँ मौका छिमेकीलाई प्रबलित गर्न 7/12! | Holmbygden.se
नयाँ मौका छिमेकीलाई प्रबलित गर्न 7/12!
पोस्ट 27 नोभेम्बर, 2015 द्वारा Holmbygden.se
OBS! गर्न सहानुभूति सूचित thomas.aslin@sundsvall.se
(तपाईंले पहिले नै HBU मार्फत त्यसो गर्नुभएको छ भने छैन)
मा सोमबार एक मौका लिन. 18 (स्थान पछि घोषणा गर्न) एक तथाकथित विस्तृत छिमेकीलाई बन्न प्रशिक्षण जाँदै गर्न. प्रशिक्षण पछि, तपाईं Holm मा एक दुर्घटनामा एक एसएमएस सीधा SOS अपरेटर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं र यो कुनै खास दायित्व वा अधिकार, तर तपाईं र मदत गर्न सक्षम छन् भने! जो वास्तवमा आफन्तहरूले कि मा फरक बनाउन सक्छ, छिमेकी वा बच्न नजिकका अरू कसैलाई!
परियोजना सुरु देखि 2013 यो छ 11 Holm सङ्केत र यो लगभग सबै एम्बुलेन्स र आकस्मिक सेवाहरूमा अघि स्वयंसेवकहरु भएको छ. तर, हामी Holm जिल्ला थप हुन आवश्यक थियो, र प्राथमिकताको Holmsjön वरिपरि सानो फैलिएको संग. वर्तमान अवस्थामा यस्तो छ. Holmsjön वा Vike दक्षिण पक्षमा कुनै एक, Loviken, Sandnäset, Kväcklingen, Österström र झुकाव. तपाईं अरू कसैलाई लाग्छ रुचि र उपयुक्त हुन सक्छ थाह. तिनीहरूलाई भन!
प्रशिक्षण द्वारा Medelpads उद्धार संघ संगठित र निःशुल्क छ. Holm, केही अन्य विभिन्न दुर्घटना मा यस तरिका तुरुन्तै सजग गराएका गर्न सकिन्छ कि स्वीडेन मा एक्लै Medelpad स्थानहरु साथ.
ट्राफिक दुर्घटना निपटाने
हृदय- & AED संग आगरणको
अक्सर साधारण महत्त्वपूर्ण कार्यहरू – मुख्य कुरा चाँडै गरेको छ. यो प्रणाली यति महत्त्वपूर्ण सही Holm p.g.a बनाउँछ. दुर्घटनामा सामान्यतया बारेमा छ कि. 20-60 निकटतम एम्बुलेन्स र उद्धार सेवाहरूबाट मिनेट.
तपाईं Holm यसको आफ्नै Defibrillators छ थाहा!?
थप पढ्नुहोस् र प्रबलित छिमेकीलाई मा कथा हेर्न holmbygden.se/akut (मार्फत सजिलै फेला “ ” गृह पृष्ठ को शीर्ष मा).
K प्रश्न संग ontact:
Medelpads उद्धार संघ
थोमस Åslin, आगो निरीक्षक / आन्तरिक दल
परियोजना थप पढ्नुहोस् (fr. 2012), यहाँ क्लिक गर्नुहोस.बन्द.
ग्रामीण क्षेत्रमा मान्छे शहरी क्षेत्रमा मान्छे दुर्घटना विरुद्ध सुरक्षा को नै स्तर पुगेको गर्न सकिँदैन. यस नगरपालिका गरेको नागरिक दुर्घटना विरुद्ध "बराबर सुरक्षा" हुनुपर्छ र यो परियोजना राम्रो यो उद्देश्य पुग्न चाहन्छ.
ग्रामीण क्षेत्रमा शहरी क्षेत्रमा भन्दा दुर्घटना विरुद्ध कम सुरक्षा छ जहाँ ठूलो- र उच्च जनसंख्या घनत्व संग क्षेत्रमा आधारित आपतकालीन सेना. थप रोकथाम र यति दुर्घटनाहरु को रोकथाम मा ऐनको भागहरु पुगेको छैन पहिलो शर्त गर्न नागरिक समाज क्षमता सक्षम बिना.
व्यक्तिगत लागि समर्थन मार्फत देहात मा दुर्घटना विरुद्ध राम्रो सुरक्षा.
ग्रामीण मा दुर्घटना विरुद्ध सुरक्षाको लागि एक अवधारणा विकास. अवधारणा ग्रामीण र उपाय सबैभन्दा लाजमर्दो दुर्घटना थाह मा खण्डमा (परामर्श, जानकारी, पर्यवेक्षण आदि) कम र यी व्यवस्थापन गर्न. अक्टोबर द्वारा व्यवस्थापन MRF लागि वर्तमान अवधारणा विचार 2012.
खोजी च्यानलहरू जसबाट शिक्षा र जानकारी प्रणालीबद्ध संचालित गर्न सकिन्छ, र यी मानिसहरू स्थानीय "सुरक्षा मान्छे" हुन चाहने फेला मार्फत (यी मान्छे को लागि नाम विचार). संख्या ब्याज र समुदाय को आकार मा निर्भर गर्दछ
अक्टोबर-डिसेम्बर महिनामा 2012, न्यूनतम को अवधारणा मा पाइलटहरूले लागू 3-5 ग्रामीण मा शहरी क्षेत्रमा समुदाय.
जनवरी-फेब्रुअरी 2013, परियोजना र MRF र एक प्रक्रिया स्थायी मा काम विकास गर्न यसको क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने FIP नगरपालिका कर्मचारीहरु बाट दुर्घटना विरुद्ध सुरक्षा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ. मूल्यांकन पनि एसएमएस अलार्म को संभावना वा समावेश गर्नुपर्छ भनेर धेरै स्थानहरू पछि आवश्यकताहरु मापदण्ड मा सहमत भएको मा पेश गर्ने "सुरक्षा मान्छे" साथै अवसर पठाइएको गर्न सकिन्छ जस्तै (उदाहरण 30 स्थानीय आगो सेवा मेरो योगदान). काम रिपोर्टमा संकलित र व्यवस्थापन टोली MRF अन्तिम फरवरी प्रस्तुत छ 2013.